Building Construction and Infrastructure: ၁.၆ ၊ ကုန်ကျစရိတ် ပေါ်အကျိုးသက်ရောက် မှု (The Impact on Construction Cost)
၁.၆ ၊ ကုန်ကျစရိတ် ပေါ်အကျိုးသက်ရောက် မှု (The Impact on Construction Cost)
အဆောက်အအုံ မြင့်လာတာ နဲ့ အမျှ၊ Equipment တွေကို Hoisting လုပ်ဘို့၊ Material တွေ အပေါ်ထပ်ကို သယ်တင်ဘို့ရာ ပိုလည်းကြာ၊ စီစဉ်ရတာက လည်း ပိုလို့ ရှုတ်ထွေး လာလေလေ ဖြစ်ပါတယ်။
ဆောက်လုပ်ရေး အလုပ်သမား အများစုဟာလည်း အပေါ်ရောက်ဘို့ ပြန်ဆင်းဘို့ နဲ့ တစ်နေကုန် အပေါ်ထပ်တွေမှာပဲ နေပြီး အလုပ်လုပ် နေရတာမို့ လုပ်ငန်းလည်း သိပ်မတွင်ပါဘူး။ Structural နဲ့ M&E Systems တွေကလည်း ပိုပြီး ရှုတ်ထွေး ပါတယ်။ ဆောက်လုပ်ရေး နည်းပညာတွေ လည်း ခြားနား ပါတယ်။
၁၀ ထပ် ထက် ပိုမြင့်တဲ့ အဆောက်အအုံ တွေ ရဲ့ Cost / Floor Area ကိုကြည့်မယ် ဆိုရင် ငါးထပ် တိုးတိုင်း၊ တိုးလာတဲ့ အထပ်တွေရဲ့ ကုန်ကျစရိတ် ဟာ ၁၀% ကနေ ၁၅% လောက်အထိ ပိုပိုတိုးလာတာ တွေ့ရပါလိမ့်မယ်။
အထပ်မြင့် လာတာနဲ့ ကုန်ကျစရိတ် အမျိုးမျိုး ပိုတက်လာ မှာဖြစ်ပါတယ်။ မြေနေရာ အနေအထား၊ ပစ္စည်းပစ္စယ ကိုင်တွယ်ထိန်းသိမ်း မှု၊ Architectural Details နဲ့ ကျွမ်းကျင်လုပ်သား တွေ ၊ ကန်ထရိုက်တာ တွေရဲ့ အထပ်မြင့် အဆောက်အအုံ လုပ်ငန်းအတွေ့အကြုံ တွေ အစရှိတဲ့ လိုအပ်မှု အတိုင်းအတာ တွေကလည်း ကုန်ကျစရိတ် မြင့်စေတဲ့ အကြောင်းအရာ တွေ ပါပဲ။
M&E System တွေရဲ့ ဆောက်လုပ်ရေး ကုန်ကျစရိတ်
အဆောက်အအုံ ရဲ့ အမျိုးအစား၊ နိုင်ငံ ရဲ့လူနေမှု အဆင့်အတန်း၊ Architectural Design နဲ့ ရွေးချယ်တဲ့ M&E systems ကို မူတည်ပြီး ကုန်ကျစရိတ် အမျိုးမျိုး ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။
အချို့နိုင်ငံတွေ မှာ ဒေသအလိုက် Construction Costs Manual ကုန်ကျစရိတ် ကို အလွယ်တကူ ခန့်မှန်း နိုင်ဘို့ အတွက် လက်စွဲ စာအုပ် ကို ဝယ်ယူရရှိ နိုင်ပါတယ်။ Quantity Surveyor Company တွေ မှာလည်း Projects အမျိုးမျိုး၊ အရွယ်အစား အမျိုးမျိုး အတွက် ကုန်ကျစရိတ် Benchmark တွေ ရှိလေ့ရှိပါတယ်။
ဒီနေရာ မှာ ကုန်ကျစရိတ် တွေ အကြောင်း ကို အသေးစိတ် ပြောမှာ မဟုတ်ပဲ MEP Systems တွေ ရဲ့ ကုန်ကျ စရိတ် ကို အဆောက်အအုံ တစ်ခု လုံးရဲ့ ကုန်ကျစရိတ် နဲ့ နှိုင်းယှဉ် နိုင်ဘို့ နမူနာ ကို ဖော်ပြပေးမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
Fully Air-conditioned လုပ်ထားတဲ့ High Quality Building တွေရဲ့ ကုန်ကျစရိတ် ရာနှုန်းကို အောက်က ဇယားမှာ ဖေါ်ပြ ထားပါတယ်။ ဒီရာနှုန်း တွေဟာ အကြမ်းအားဖြင့် မှီငြမ်းဘို့သာ ဖြစ်ပြီး ဒီဇိုင်းလုပ်ရင်း နဲ့ ကုန်ကျစရိတ် တွေကို ဆက်လက်စိစစ် ပြုပြင်ဘို့ ဖြစ်ပါတယ်။
Table ၁.၆.၁. M&E Floor Area လိုအပ်ချက် အမျိုးမျိုး
(Type of Occupancy) စုစုပေါင်း ကုန်ကျစရိတ် ၏ ရာနှုန်း
နည်း လတ် များ
ကွန်ပြူတာ စင်တာများ ၃၀ ၄၅ ၆၀
ကုန်တိုက် (ကုန်ပဒေသာဆိုင်ကြီး)များ ၂၀
ဆေးရုံများ (Research) ၃၀ ၄၀ ၅၀
ဆေးရုံများ (Clinical) ၂၀ ၃၀ ၃၅
အဆောင်၊ ဘော်ဒါဆောင်များ ၁၅
ဟိုတယ် (တည်းခို၊ နေထိုင်ရန်) ၂၀
ဟိုတယ် (Convention ညီလာခံ) ၂၅
ရုံးခန်းများ (အထွေထွေ) ၂၀
ရုံးခန်းများ (High-Tech) ၂၅
သုတေသန Laboratories များ ၃၀
လူနေအိမ် (မိသားစု) ၁၀
အထပ်မြင့် တိုက်ခန်းများ ၁၅
စတိုးဆိုင်၊ လက်လီဆိုင်များ (လုံးချင်း) ၁၀ ၂၀ ၂၅
စတိုးဆိုင်၊ လက်လီဆိုင်များ(ကုန်ပဒေသာဆိုင်) ၂၀ ၂၅ ၃၀
မူလတန်း ကျောင်းများ ၁၅
အလယ်တန်း ကျောင်း ၁၅ ၂၅ ၃၅
တက္ကသိုလ်၊ ကောလိပ် များ* ၂၀
* စာသင်ကျောင်း ဆောင်များ အတွက်သာ ဖြစ်ပါသည်။ အခြား Laboratories လက်တွေ့ ခန်းများ၊ ကွန်ပြူတာ စင်တာ၊ ဘော်ဒါဆောင်များ ကိုသက်ဆိုင်ရာ နာမည်နှင့် ကြည့်ပါ။
M&E System တွေရဲ့ Operating Cost (လည်ပတ်ရေး စရိတ်)
အဆောက်အအုံ ရဲ့ Operating Costs တွေကတော့ ပြုပြင် ထိန်းသိမ်းစရိတ်၊ ပြင်ဆင်စရိတ်၊ ပစ္စည်းလဲလှယ် စရိတ်၊ ရေ၊မီး၊ မီတာခ၊ အလုပ်သမားစရိတ် နဲ့ စီမံခန့်ခွဲ စရိတ် တွေပါဝင်ပါတယ်။ အဆောက်အအုံ တွေ ရဲ့ Architectural and Structural Components တွေ ဟာသက်တမ်းအကြာကြီး ခံတာမို့ ခနခန လဲပေးဘို့ မလိုအပ်ပါဘူး။ (အမိုးတွေကလွဲလို့ပေါ့လေ)။ M&E Systems တွေအတွက်က တော့ အဲသလိုမျိုး မဟုတ်တာမို့ စွမ်းအင်သုံးရရုံ သာမက အမြဲတမ်း ပြုပြင်ထိန်းသိမ်း ဘို့လည်း လိုအပ် ပါတယ်။ တကယ့်လက်တွေ့ မှာလည်းပဲ Life Cycle တစ်ခုမှာ Owning and Operating M&E systems ပိုင်ဆိုင်မှု နဲ့ လည်ပတ်မှု စရိတ် တွေက မူလ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံ ထားတဲ့ စရိတ်ထက် ကို ပိုမို ကုန်ကျ နိုင်ပါတယ်။ ထိထိရောက်ရောက် အကျိုးရှိ တဲ့ Life Cycle တွေရဲ့ အရေးပါ မှုဟာ အလေးအနက် ထား ပြောနိုင်ဘို့ လွယ်လွန်း လှတာတော့ မဟုတ်ပါဘူး။
Tropical Weather Region မှာ 24/7 (တစ်ရက် ကို ၂၄ နာရီ၊ တစ်ပါတ် ကို ၇ ရက်) မနားတမ်း လည်ပတ် နေတဲ့ Data Centers တွေ အတွက် HVAC Systems တစ်နှစ်စာ Operation Cost က HVAC Systems ကို အပြီးအစီး တပ်ဆင်ပြီး Testing & Commissioning လုပ်ပြီးသည် အထိ ကုန်ကျတဲ့ စားရိတ် ရဲ့ တစ်ဝက်ကျော် လောက်ကို ရှိနိုင်ပါတယ်။
စကာင်္ပူ နိုင်ငံ မှာ အိမ်သုံး Multi-Split Type Air Conditioners တစ်တွဲ ကို နေ့ရောညပါ မနားတမ်း သုံးစွဲ မယ်ဆိုရင် ကုန်ကျမဲ့ တစ်နှစ်စာ မီတာခ က သူ့ကို အသစ်ဝယ်ဆင် တဲ့ တန်ဘိုး နီးပါးလောက် ကုန်ကျ နိုင်ပါတယ်။
စကာင်္ပူ နိုင်ငံ HDB Flat အိပ်ခန်း သုံးခန်း အတွက် အကြမ်းဖျဉ်း ကြည့် ရင် Master Bedroom အတွက် (3.51 kW (12,000 btu/h) x 1 နဲ့ Common Bedrooms တွေ အတွက် 2.93 kW (10,000 btu/h) x2စုစုပေါင်း 9.37 kW (32,000 btu/h) Cooling Capacity ရှိပါတယ်။ ပျမ်းမျှ COP က 2.5 လောက် ရှိပါတယ်။ COP = Cooling Capacity (kW) / Input Power (kW)
ဒါကြောင့် Full Load မှာ Input Power 3.75kW လိုအပ်ပါတယ်။ Load က အမြဲ Full-Load မဟုတ်တဲ့ အတွက် Compressors တွေက အမြဲတမ်း လည်ပတ်နေမှာ မဟုတ်လို့ Load Factor ကို 0.6 လောက်ထားပြီး မီတာခ တစ်ယူနစ် 19¢/kWh နဲ့ စဉ်းစားမယ်ဆိုရင်။
3.75 kW x 0.6 x 24 h x 19¢/kWh x 365 = $ 3,745
မူလ ကုန်ကျစားရိတ် က ပျမ်းမျှ $ 2,100 လောက်ပဲ ရှိတာ မို့ နှိုင်းယှဉ် ကြည့်နိုင်ပါတယ်။
ဒီနေရာ မှာ ဧည့်ခန်း အတွက် မဖေါ်ပြထားပါဘူး။ ဧည့်ခန်း အတွက် Cooling Capacity က ကြီးမား လေ့ရှိတာမို့ တော်ရုံ နဲ့ တတ်နိုင်ဘို့ မလွယ်ပါဘူး။ တတ်ပြီးရင် လည်း တန်အောင် သုံးမှ ဆိုတော့ ကိုယ်ပိုင် အိမ်ထိုင် ရုံးခန်းဖွင့် သုံးမယ်ဆိုမှပဲ….
COP4ကျော်ကျော် အထိ ရနိုင်တဲ့ Energy Efficient Inverter Controlled Model တွေ ကို သုံးရင် ဒီကုန်ကျ စရိတ် ကို 50% လောက်အထိ လျှော့ချနိုင်ပါတယ်။
စာရေးသူ အတွေ့အကြုံ အရ အားလုံး အပြင်ထွက် အလုပ်လုပ်တဲ့ Working class မိသားစု တစ်ခု အတွက် Air-con တစ်နေ့ ပျမ်းမျှ ၈ နာရီ (Weekday nights + Weekends) သုံးမယ် ဆိုရင်တော့ စုစုပေါင်း ကုန်ကျစားရိတ် ကို ခုလို ခန့်မှန်း နိုင်ပါတယ်။
Energy Efficient Inverter-Controlled Air-con: 1.0S$ / room.night
Window Unit Air-con: 1.5 to2S$/room.night)
Posted by Ko Chaw - ကိုချော at 11:42 PM Labels: MEP Systems